PSY-JEUNES / ADOS » alcool
Ny tanora sy ny Sigara ary ny Toaka
Posted by admin On mars - 2 - 2011 ADD COMMENTS
Tamin’ny taona 90 dia 18 taona ny tanora no nanomboka nisotro zava-pisotro misy alikaola na nifoka sigara. Amin’izao vanim-potoana izao kosa dia eo amin’ny kilasy faha 3, izany hoe eo amin’ny 15 taona eo, dia efa misy manao izany. Misy aza ao amin’ny kilasy faha 4 dia efa manandrana mifoka na misotro.
Maro ny fanontaniana nanitikitika ny tanora kilasy 1ère L ao amin’ny lycée JJ Rabearivelo mahakasika ny sigara sy ny toaka ary ny rongony. Anisan’ny fanontaniana napetrak’izy ireo ireto manaraka ireto
Mety mbola ho afaka ve ny olona tafaroboka amin’ny fifohana sigara ?
Maha afaka ny sery marina ve ny sigara misy menthol ? (good look maintso)
Misy artiste hono raha vao tsy mifoka rongony dia tsy mivoaka ny aingam-panahiny?
Ratsy ve ny toaka? Mety ilaina ihany ve izy? Sa ny fahazarana no ratsy?
Mahavaha olana ve ny toaka?
Tsy mampaninona hono ny mifoka sy misotro raha “mikotrana” be aorian’izany?
Tsy maintsy ny fianakaviana ve no mitondra ny olona efa miankin-doha te hiala any
amin’ny mpitsabo? …
Ny sigara :
Mora idirana fa sarotra ialàna
Tsotra dia tsotra ny idirana amin’ny fifohana sigara: Manandrakandrana. Indraindray aza dia ny ray amandreny izay mifoka ao an-trano ihany no mampanao izany. Rehefa avy eo dia manomboka miafina ary mifampitarika sy mifaninana amin’ny namana. Noho izany dia mihamitombo mora foana ny isan’ny sigara fohana. Matetika efa tafiditra lalina izay vao
tratran’ ny ray na ny reny hoe mifoka . Eo dia efa sarotra ny hialana ary matetika aza dia lasa antony hifamaliana amin’ny ao antrano ny sigara. Ny fitrangan’ny disadisa matetika anefa dia voa maika toa mamporisika ny tanora hifoaka. Mifandraika amin’ny fotoana tiany hampisehoana sy hanaporofona ny fahaleovantenany eo imason’ny ray amandreny koa io
fifohana sigara io.
Aty aoriana, rehefa tsy ampy ny enti-manana, satria tsy maintsy vidiana ny sigara, vao tonga saina ary matetika te hiala amin’izay na te hijanona.
Sarotra anefa ny miala aminy, sarotra noho ny miala amin’ny rongony aza. Ela ela ny fizarana amin’ny sigara fa sarotra kokoa no miala. Ny pifoka sigara manko dia tompon’ny tenany sy ny sainy hatrany noho izany dia miankina be dia be amin’ny finiavana sy ny famafisan’ny saina ny fahahahana miala aminy. Enjana dia enjana ny resaka safidy eo sady misy fiantraikany be amin’ny atidoha ihany koa ny singa avy ao amin’ny sigara izay mitarika fahazarana.
Ny sigara, na misy menthol na tsia, dia misy karazana “anésthésie” izay mankao amin’ny aty orona rehefa mifoka. Raha voan’ny sery izany dia mety mieritreritra ny pifoka azy hoe misy fiantraikany ny setro-tsigara. Io anefa dia vetivety kely sady tsy manasitrana velively ilay aretina akory. Tsiahivina fa vokatry ny virus ao amin’ny vatana fa tsy ao amin’ny orona ihany ny sery.
Misy ihany koa ireo misinda kely “hisintona” kely rehefa sarotsarotra iny ny matematika ohatra. Miverina avy nifoka izy dia mihevitra fa hiverina ny fifantohany. Eritreritra fotsiny ihany anefa izany noho ilay “anesthésie” hateraky ny sigara izay toa mahaverivery saina, mahalasalasa fisainana eny mahaverivery tadidy aza.
Ny fisotroana toaka na zava-pisotro misy alikaola dia entin’ny sasany hanamarinana fihetsika.
Misy mantsy tanora te hisehoseho sy te hisetrasetra ka heveriny ho fomba iray ahafahany
manao izany ny toaka.
Manala ny henatra ihany koa izy io, izany hoe mahatonga ny olona misotro azy ho sahisahy kokoa. Toa mahasahy kokoa manantona sipa.
Miantefa amin’ny faritra kely ao am-povoan’ny atidoha ao ny alikaola ka mahatonga ny vatana hahatsiaro ho “dozidozy” na sambatsambatra. Ny olana anefa dia lasa mitady io toe-batana sambatsambatra io foana ny vatana aorian’izay. Izany no mahatonga hatrany ny fizarana eo amin’ny olona iray. Ny fiafarany dia lasa tamana eny tsy afa miala amin’ny toaka
Tsy te ho irery
Misy “effet de mode” eo anivon’ny tanora. Izany hoe ireo mitovy zavatra tiana ihany no mitambatra. Anisan’ny zavatra tian’ny tanora noho ny antony maro ny toaka sy ny sigara. Soa anefa fa mbola misy ary tsy vitsy ireo tsy tia na koa tsy tia hiditra amin’izany. Mety ho fahoriana anefa izany hoe tsy misy namana izany raha mbola samy tanora. Vokatr’izany dia
mety hisy tanora voatery hifoka na hisotro mba hafahana miditra amin’ny vondrona tanora iray.
Ny fanontaniana tena mipetraka anefa dia izao: Namanao na mendrika ny ho namanao tokoa ve io hiarahanao io? Ny zava dehibe indrindra porofon’ny maha namany anao ve tsy ny fanajany ny maha ianao anao? Inona no zava-dehibe kokoa, ianao sy ny ho avinao? Sa ny olona hiarahanao, izay heverinao ho namanao?
Te hanana fiainana tonga lafatra
Betsaka ny olona no miditra amin’ny sigara sy ny toaka mba hialana amin’ny zava-misy (amin’ny fiainana tena izy, ndlr). Rehefa lasa anefa ny herin’ny alikaola na ny sigara dia tsara ho fantatra fa tafaverina hatrany eo amin’ny zava-misy ilay olona. Tsy mahagaga raha mahatsiaro very rehefa tsy misy ilay toaka na sigara intsony. Voa maika miha mitombo ny adintsaina na miha mavesatra ny fahoriana ka voa maika mety mahatsiaro resy noho ny tamin’ny mbola tsy nisotro na nifoka aza.
Misy fiantraikany ratsy ho an’ny fahasalamana anefa « ny toaka sy ny sigara : manimba hoditra, ny “muqueuses” ao anaty vava, manimba ny nify, misy fiantraikany maro amin’ny lalan-drà indrindra makany amin’ny fo sy ny atidoha. Mahatonga homamiadana maro toa ny aty tenda, ny lala tsakafo, ny avokavoka eny fan a ny homamiadan’ny “vessie”aza Voaporofo
araka izany fa diso be ny fiheverana fa afaky ny ezaka ara-batana na “effort physique” ny poizina ampidirin’ny toaka sy ny sigara ao anatin’ny vatana. Resakin’ny olona mitady hevitra tsy hialana amin’izy ireo izany.
Ogino : Mitondra aretina ny sigara sy ny toaka. Tokony hiresaka milamina amin’ny zanany izay mifoka sy misotro ny ray amandreny fa tsy tonga dia disadisa be.
Tojo : Tsy mifoka sy tsy misotro aho. Ny namako rehetra anefa mifoka sigara sy rongony ary misotro daholo. Tsy voatery ho vaotarika amin’ilay izy ny olona fa miankina amin’ny tsirairay ihany io.
Fetra : Tsy ifaninanana ny mifoka sigara. Efa adiny 6 aho izao no tsy nifoka androany ary tapa-kevitra ny hiala mihitsy.
Eric : Fantatro izao fa tsy voatery hifoka, hihinana na hitsindrona rongony ny artista rehefa hamoaka ny aingam-panahiny.
Mamy : Efa hita izao fa ratsy ny sigara sy ny toaka. Tsy ny namana foana koa no jerena fa izay mahasoa ny tenanao.
Tsirava : Fanandrakandramana no ahatafidirana amin’ny sigara fa mety hovokatry ny fiainana ihany koa, toy ny “problème familial” ohatra hoe kely dia efa miasa …